Ukuphazamiseka Kwempilo yamaNdebele
Phakathi nekhulu lama-20, izinguquko ezinkulu kwezolimo ezimhlophe zaholela abaqashi basePelebele ukuthi babe nokucindezelwa okwandayo. Kwezinye izimo, umlimi wayezokhipha imishini futhi, engasadingeki ukuthi asebenze izisebenzi ezincane, angamane axoshe umndeni. Kwezinye izimo, umlimi wayesekhuphula kancane kancane isikhathi esasisetshenziswa amadoda amasha epulazini, okwenza amadodana amaningi aseNdzundza abaleke.
Njengoba umndeni ungasakwazi ukufeza umsebenzi wezisebenzi, abazali nodade bomuntu bazobe sebexoshwa emapulazini, futhi umndeni wonke ufanele uthole indawo entsha yokuhlala. Zombili lezi zimo zabona izinombolo zeNdzundza - zivame ukuhamba nezinkomo zezinkomo ababezakhele - zifuna izindawo ezintsha zokuhlala. Bathuthela ezweni elisha elisha laseKwaNdebele noma kulabadala (iNorthern Sotho) ezweni lakubo laseLebwawa.
Abagxeki abaningi babona KwaNdebele njengowokugcina 'umhlabathi wokulahla', futhi babheka 'uNgqongqoshe' wabo kanye nabaholi bakhe abanobubi njengama-government of the apartheid. Kodwa kwakuzoba yindawo yesigameko esicishe sikhulu noma esicacile kuneBoer-Ndebele War of 1883.
Phakathi nezinsuku ezimnyama kakhulu zobandlululo, ngasekupheleni kwawo-1980, kwavela ukuxoshwa okuthandwayo, okusekelwa yinkosi yaseNdzundza eyayibusa ngaleso sikhathi, ngokumelene nezikhulu ezicindezelayo zikahulumeni kaNdebele. Lokho kwakungukusekelwa okujabulele ukuvuswa kwalokhu ukuthi kwaphumelela ngokuphumelela zonke iziphakamiso zokuzimela kukaNdebele ngaphansi kobandlululo. I-Ndebele yayibonise, futhi iyaqhubeka ibonisa, ukuthi imasiko ayinzima njengoba ingase ibonakale, nokuthi isimo sengqondo sobukhosi singasetshenzwa enkonzweni yentando yeningi.